Inona no ho hitanao ao Montevideo | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hitanao ao Montevideo
Mariela Carril | | Montevideo, Inona no ho hita
Any Amerika atsimo, eo amin'ny vavahadin'ny Río de la Plata, dia misy firenena kely antsoina hoe Uruguay. Ny renivohiny dia ny tanànan'i Montevideo ary anio dia ho hitantsika ny tantarany ary inona izany toeram-pizahan-tany.
Ka manakaiky an'i Buenos Aires, renivohitr'i Arzantina, dia mpandeha matetika no manao fitsangatsanganana, "miampita ny dobo", araka ny voalazan'izy ireo etsy akaikin'ny Río de la Plata, iray amin'ireo renirano midadasika indrindra eto an-tany, mba maka rivotra mangina, ny mahazatra ny tanàna kely.
2 Inona no hitsidika an'i Montevideo
Ny renivohitra Uruguay dia nomena anarana ho an'ny tendrombohitra izay eo akaikin'ny bay ary misy dikan-teny maromaro miresaka momba ny niandohan'ny anarana. Izy rehetra dia mampifandray ny matoanteny mba hahitana amin'ny teny hoe tendrombohitra. Milaza amintsika izany ny tantara tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia tonga ireo mpivahiny voalohany ary nanomboka natsangana ny tanàna. Tamin'ny faran'ny taonjato lasa teo, ny Portiogey dia efa nanangana, tsy lavitra, ny morontsirak'i Buenos Aires, tanàna tsara tarehy antsoina hoe Colonia de Sacramento.
Ka tamin'ny 1723 dia nanangana an'i Montevideo ny Portiogey fa herintaona taty aoriana dia navoakan'ny Espaniola izy ireo. Niampita ny Río de la Plata avy any Buenos Aires niaraka tamin'ny fianakaviana mpisava lalana vitsivitsy izy ireo, ny sasany avy amin'ity tanàna ity, ny sasany tonga avy any amin'ny Nosy Canary, miampy ny karana Guarani ary ny mainty hoditra avy any Afrika.
Ny tantaran'ny Montevideo sy ny an'i Uruguay amin'ny ankapobeny dia mifamatotra akaiky amin'ny tantaran'i Buenos Aires sy Arzantina, fa ny akaiky ny zanatany Portiogey any Brezila koa dia nisy ny fitaomana. Taty aoriana, ny fanenomana sy ny fikirakirana an'i Angletera izay tsy nitaky fanjakana iray tokana tamin'ny vavahadin'i Río de la Plata, niaraka tamin'ny fanampian'ny boriboritany ambony Buenos Aires, federaly tena kely, Nanjary mahaleo tena i Orogoay tamin'ny 1828.
Avy eo, tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX ary mifampitantana miaraka amin'ny fizotry ny fifindra-monina an'ny mpifanila vodirindrina aminy Arzantina, eropeana maro no nanomboka tonga, indrindra avy any Italia sy Espana. Tao anatin'ny folo taona voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX, nanomboka niforona ny tanàna manodidina an'i Montevideo sy ny fampandrosoana ny tanàna.
Inona no hitsidika an'i Montevideo
Montevideo dia tanàna taloha ka manomboka ny fitsidihana satroka manan-tantara. Teo aloha dia nisy rindrina vato sy trano mimanda io. Ny hany sisa tavela dia ny varavarana, eo anelanelan'ny Peatonal Sarandí sy ny Plaza Independencia. Ao anatin'ny ivon-toerana manan-tantara no ahitanao ireo trano tranainy indrindra, tranombakoka, kafe fisakafoanana mahafinaritra, trano fisakafoanana ary olona miantsena.
La Sarandí mpandeha an-tongotra dia ny fidirana amin'ny Old City, mampifandray teboka roa manan-danja amin'ny tapany taloha amin'ny tanàna: amin'ny lafiny iray ny Kianjan'ny fahaleovan-tena ary amin'ny lafiny iray kosa ny Kianja lehibe, Ben'ny tanàna Plaza taloha. Fitsangatsanganana an-toerana miloko izay manomboka amin'ny isa 250 ka hatramin'ny isa 700. Rehefa noravana ireo trano mimanda nandritra ny taonjato maro, dia nosokafana ny tanàna ary avy eo, ny Plaza Independencia, no nifandray tamin'ny Tanàna Tanana sy ny New City.
Manodidina azy ny Salvo Palace, Etévez Palace, Executive Tower, Solía ​​Theatre ary Puerta de la Ciudadelmankany Ao afovoan'ny kianja no misy ny tsangambaton'i José Gervasio Artigas, ilay maherifo nasionaly, miaraka amin'ny mausolika azy. Tsara ny manasongadina ny Solís Theatre, fananganana tamin'ny 1856, izay naverina tamin'ny taona 2004 ary manana trano fivarotana sy trano fisakafoanana atolotra.
Ho fanampin'izany, misy fitsangatsanganana misy torolàlana amin'ny Alakamisy, Zoma ary Sabotsy amin'ny 11 sy 12, Afaka manao famandrihana avy amin'ny tranokala Montevideo ianao. Raha tsy izany dia afaka mandeha manomboka ny talata ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 18 hariva ianao, ary raha te-hanao izany avy any an-trano dia azonao atao ny mampiasa ny Solis App hitsidika ny teatra amin'ny fomba soloina sy amin'ny zava-misy mihabe.
Tranon-kolontsaina hafa hitsidihana an'i Montevideo no Space Art ankehitriny, tranombakoka Andes 1972, ny Toerana ara-kolotsaina eo am-pototry ny rindrina, ny Tranom-panjakana tranom-panjakana, ny Tranombakok'i Vilamajó House, ny Tranombakoky ny zavakanto talohan'ny Columbian sy ny vazimba, ny Museum of Arts haingon-trano, ny Fine Arts Museum, ny Museum of Art History, ny Museum of Memory, ny Migration Museum na ny Old Customs Museum.
Raha tianao ny Fetibe Montevideo dia manana fomban-drazana lehibe ary azonao atao ny mahafantatra azy ao amin'ny Museum an'ny karnavaly. Tian'ireo Orogoaiana koa ny baolina kitra, mba hahafahanao mitsidika ny Tranombakoka Footballvilia sa ny Museum an'i Peñarol, ary hianarana momba ny fomban-drazana gaucho dia misy ny Museum an'i Gaucho. Misy ihany koa ny trano tranainy vitsivitsy, avy amin'ny zanatany, misokatra ho tranombakoka, toy ny Garibaldi House, ny Romantic Museum na ny Rivera House.
El Lapan'i Salvo Trano marika iray hafa ao Montevideo izy io. Daty avy amin'ny 1928 ary ny anadahy roa vita amin'ny lamba no nanorina azy. Misy rihana 27 sy 105 metatra ny haavony, ka io no tilikambo avo indrindra tany Amerika Latina hatramin'ny 1935.
I Montevideo dia tanàna iray izay tsy mijery ny Río de la Plata, ka raha fahavaratra na lohataona no alehanao dia mety ny mandeha mamaky ny morontsiraka fotsiny sy ny rano madio. Misy promenade efa ho 30 kilometatra Mihazakazaka manamorona ny moron-dranomasina izy ka mandeha tsara. Ny hevi-dehibe amin'ny diabe dia ny Fahatsiarovana ny Famonoana Tambabe Jiosy, ny Escollera Sarandí, ny Punta Cárdenas Lighthouse, ny Montevideo Cartel, ny Plaza Virguilio ary ny Puertito de Buceo.
Hankafy ny tsara fahitana panoramic an'i Montevideo dia mila manao izany ianao mankanesa any amin'ny havoana, miaraka amin'ny haavony 135 metatra ary eo an-tampon'ny General Fortress of Artigas, ny Fijery Panoramic ary ny Tilikambo fifandraisan-davitra avy amin'ny manodidina an'i Aguada.
Tonga ny alina, ahoana ny fiainana Night any Montevideo? Ho an'ny kilasika indrindra misy milongas sy klioba handihizana tango, fitaratry ny Buenos Aires izay mety mahasarika ny mpizahatany.
Amin'ny fahavaratra dia afaka mankafy ny teatra fahavaratra, ambanin'ny lanitra misokatra, ary raha tianao ny sakafo dia misy ny Tsena Gastronomika an'ny tanàna taloha, miaraka amin'ny tsiro maro karazana. Ao ny Mercado Agrícola de Montevideo, misy magazay 100, ny Sinergia Design, ny Ferrando Market, ny Siam Market ary ny William Market, mba hanonona vitsivitsy fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Montevideo » Inona no ho hitanao ao Montevideo
Inona no ho hita ao Santo Domingo